အဲဒီနေ့က စွယ်တော်တွေ ချုံးပွဲချငိုကြတယ်။ ဆောက်တည်ရာမရတော့ ခြေလှမ်းတွေက ဦးတည်ရာမဲ့။ အားလုံးရဲ့မျက်ဝန်းတွေက လွမ်းရိပ်သန်းလို့။ တိုင်လုံးကြီးတွေကိုဖက်ပြီး ပက်ပက်စက်စက်ငိုနေတဲ့ အတန်းထဲကကောင်လေးကိုတွေ့တော့ ခါတိုင်းလို မပြုံးဖြစ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မျက်ရည်ဝဲ။ ကြွေကျလာတဲ့ စကားပန်းဖြူဖြူလေးတွေ တမြတ်တနိုးကောက်နေမိတော့ နှစ်ငယ်တန်းကကျောင်းသူတချို့ နားမလည်သလို ငေးသွားကြတယ်။ ကားပတ်ကင်မှာတော့ အဖြေမရမက တောင်းခံနေရပုံရတဲ့ ကောင်မလေး။ အရူးအမူးစွဲလန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံအောက်မှာ ရှက်သွေးတွေဖြာလို့။ လေနုအေးကနော့တော့ ကိုယ်ဆံပင်ရှည်တွေက ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြက်ရိုင်းတွေနဲ့အပြိုင် အထိန်းအကွပ်မဲ့။ ခရေပန်းရနံ့လေးကသင်းပျံ့ပျံ့။ ခရေပင်လေးတွေ စီစီရီရီနဲ့ ချစ်သူလမ်းကြားလေးမှာ တွဲလက်တွေ။ ဘဝထဲဝင်ဖို့ အားယူနေကြရဲ့။ ချိုင့်ဝှမ်းလေးထဲက စာသင်ဆောင်တွေမှာ ပထမနှစ်က ခြေရာတွေရှာဖွေမိသေး။ တီပေတံတကားကား၊ ပုံဆွဲစက္ကူလိပ်ကို့ရို့ကားယားနဲ့ ဆံပင်တိုတိုကောင်မလေးတယောက်ပုံရိပ်က မပြတ်မသား။ စွယ်တော်တွေက အဲဒီနားတဝိုက်မှာ အဖော်အသင်းနဲ့။ ဟိုးကမိုးပျံတံတားပေါ်မှာ ချော်လဲခဲ့တုန်းက ဝိုင်းလက်ခုပ်တီးခဲ့တဲ့ အစုတ်ပလုတ်တွေကို ခုတော့လွမ်းချင်ချင်။ မကြာသေးခင်ကမှ လောလောလတ်လတ် မေတ္တာမျှသွားတဲ့ ဆရာနဲ့ဆရာမကို တွေ့တော့အားကျမိသလိုလို။ ဒီအရိပ်အောက်က သူတို့ဘဝက ငြိမ်းချမ်းပါဘိ။ ကိုယ့်အတွက်တော့ အနာဂတ်လမ်းက ဝေဝေဝါးဝါး။ လက်ခုပ်သံတချို့ကြောင့် ငေးကြည့်မိတော့ မေဂျာမတူ၊ နှစ်တူတဲ့ကျောင်းသားတယောက် သြဘာလမ်းမှာ အမှတ်တရခြေရာတွေ ခြွေချ။ Lဆောင်တွေရှေ့က လှေကားထစ်တွေမှာ ခဏမှီငေး။ စိန်ပန်းပင်တွေက ကနွဲ့ကလျနဲ့။ ဆင်းရဲသားဂိတ်ကလေးက စည်စည်ကားကား။ ငုဝါပင်ကလေးတွေက ထီးမပါ။ ABCD ညီအကိုတွေက ညနေမစောင်းခင် မူးနေကြပြီ။ တစ်တစ်ခွခွဆဲသံတချို့ကပဲ လွမ်းစရာ။ ဒီလှေကားထစ်ကလေးရဲ့အောက်မှာ ခင်မောင်တိုးနဲ့ လွမ်းနေကြသူတချို့။ နွေးအေးကို နှုတ်ဆက်အနန်းပေးနေတုန်း အဆောင်သူယဉ်ယဉ်လေးက AUTOပေါ်ကို အမှတ်တရတွေ အန်ချခိုင်းတယ်။ AUTOပေါ်က ကိုယ့်ဓာတ်ပုံနံဘေးမှာ စကားလုံးတွေ ဖွဲ့သီပေး။ လှူပ်လှီလှူပ်လှဲ့ ယဉ်စစအလှဘုရင်မလေးရဲ့ ခြေလှမ်းကို ခံစားနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတစုက နံဘေးမှာ။ အချိန်မတန်ခင် ယစ်မူးပေါက်ကွဲနေတဲ့သူတချို့ကို စာနာမိသေး။ လေအဝှေ့မှာ ပိတောက်ပင်တွေရှိူက်သံ။ ဆည်းဆာမှာ ဂျီဟောကကြိတ်ကြိတ်ငို။ အဆောင်သူတွေအလွမ်း ဘယ်ပြေလိမ့်။ အဆောင်တံခါးခေါက် အလည်ရောက်တော့ မျက်ဝန်းတွေနီနီရဲ။ ပြန်ဆုံနိုင်မှာလား။ အခုလို ဆယ်စုနှစ်တွေကြာအောင်။ သံယောဇဉ်တွေက ထပ်ထပ်ရစ်နှောင်။ အဖြူရောင်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးရက်။ အလွမ်းတွေနစ်မြုပ်နေတဲ့ ဂျီဟောည။ အဆောင်ရှေ့က တေးသံတွေက ငိုကြွေးနေဆဲ။ မနက်ဖြန်ဆို ငါဟာကျောင်းသားမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ ရှူး...မူးမူးရူးရူးနဲ့ မအော်နဲ့ကွာ။ အဲဒီအမှန်တရား ငါမကြားချင်ဆုံးပဲ။
Posted by တန်ခူး at 5:23 PM
အဲဒါနဲ့ဘဲ တာဝန်ကျေလွန်းတဲ့ စားပွဲတင်နာရီတလုံးကို ရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ရောတဲ့လား။
မှတ်မှတ်ရရ။ အဲသည်တုန်းက ကဗျာဆရာမတယောက်ရဲ့ (ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုကထုတ်ဝေတဲ့) အမှတ်တရ အော်တိုစာအုပ်မှာ ဟောသည်လို ရေးပေးမိခဲ့။
သည်အကြောင်းတွေကိုရေးတော့ ကဗျာဆရာမရဲ့ (အဝေးဆုံးခရီးကို ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့) သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုပါ တဆက်တည်း သတိရမိသေးတယ်။
ဒို့လဲသစ်ပုတ်ပင်ကြီးအောက်ကအလွမ်းခြေရာတွေရယ်, အဓိပဓိလမ်းကမျက်ရည်တွေရယ်, ဂျပ်ဆင်အိုကြီးနံဘေးကရှိုက်သံတွေရယ်, ပုဂံလမ်းကရယ်သံလွင်ချိုချိုတွေရယ်,,,,,,ကို....
ကျနော် တကယ် မရေးတတ်ဘူးဗျာ။ အဲဒီလိုမျိုး ၀ါကျတိုလေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်တာမျိုးကို…။ အတုယူတဲ့ သဘောနဲ့ လေးငါးခေါက်လောက် ဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ် တန်ခူးရေ…။
ကျောင်းပိတ်ချိန်ရောက်တိုင်း ရေရေလည်လည် ခံစားရတဲ့ အရသာ စွယ်တော်နဲ့ ကံ့ကော် အတူတူပါ။
hi, I remember YIT, i'll link you on later.
By the way, which batch you are?
I think Ko paw also i'll be know, i'm not sure.
I loke your writing.
စွယ်တော်ရယ်... L တွေရယ်...
Lover's Lane ရယ်... Building 6, 7, 8 ရယ်... နွေးအေးရယ်...
ဒီကဗျာ ကို သတိ ရမိတယ်
ကိုပေါရေ...အဲဒီကဗျာလေးကို ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုက အဖြူရောင်သံယောဇဉ်တွေနဲ့အတူ သတိရနေပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အဝေးဆုံးခရီးကို ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းကိုpostတခုရေးဖို့ရှိပါတယ်။
မြက်ရိုင်းရှည်တွေတဲ့လားထနောင်းရယ်။ ဟုတ်တယ်...မြက်ရိုင်းတွေလဲအတော်ရှည်လှပေါ့၊ ခရေတွေလဲမျက်ရည်စိုရွှဲ၊ စွယ်တော်တွေရောရိုင်းများရိုင်းကုန်ပြီလားကွယ်။
နွယ်ရေ...အားပေးတာကျေးဇူးပါ။ နွယ့်blogလေးကိုလဲ ကျွန်မနှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်မကနွယ့်ထက်ကြီးမှာသေချာတယ်။
မေဂျာကElectronicsပါ။ နွယ်ကCivilထင်တယ်။ ကိုပေါနဲ့ကမေဂျာတူပေမယ့် ကျွန်မကအတန်းကြီးပါတယ်။ ညီအမတွေပြန်တွေ့ရသလိုပါပဲ။ Linkပေးမယ်ဆိုတာကျေးဇူးပါ။ နောက်လဲလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ နွယ့်ဆီလဲခဏခဏလာလည်မယ်နော်။
စွယ်တော်ဝေးဝေးကို ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ။ ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ပုံကိုမြင်တော့ နှစ်လလောက် တက်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို သတိရမိပါတယ်။
မ.. ဒီပိုစ် ပရင့်ထုတ် သိမ်းထားလိုက်တယ်